Ukudala ukwakheka okumnandi kunye okuthakazelisayo akuyona inkqubo elula, edinga umzamo kunye nekhono. Awukwazi nje ukwenza izimonyo kwiindawo ezibhekiselele ebusweni bakho, ngoko unonakalise isikhumba sakho okanye wenze ukubonakala kwakho kungabonakali. Kufuneka kukhunjulwe ukuba izicumbiso kufuneka zikhethwe ngokucophelela ngolunye uhlobo lwesikhumba. Sebenzisa ixesha lokubonisana ne-beautician. Uya kukucebisa ngesisombululo esihle sezonyiso ezingenakonakalisa. Ukuba uqikelele ukuzenzela okukufanayo, unokukhangela iimpawu ozifunayo.
Indlela elula yokukhetha ithoni, ukwazi ukuba unjani ulusu: unobusika, ihlobo, ekwindla okanye entwasahlobo.
Uhlobo lwe Spring.
Ukuba i-lipstick ifanelana nawe obomvu obomvu okanye obomvu obomvu, ngoko unalo uhlobo lwentwasahlobo lwentwasahlobo. Ukubonakala kwentsapho yamanzi kufuneka ihlaziye ibe yinyameko, njengomoya wentsasa yokusa. Akuyimfuneko ukupenda ngokukhawuleza ngexesha elifanayo kunye namehlo, nemilomo, kunye ne-cheekbones. Kancinci, imilomo yezamehlo kunye neenyawo ezicokisekileyo ziza kuvelisa umphumo oyifunayo.
Musa ukufihla isikhumba phantsi kolawulo lwesiseko, ingakumbi ukuba unempilo. Imibala yegolide kunye ne-beige powder ifanelekile kwesikhumba sohlobo lwentwasahlobo. Iidonki zokugqithisa kufuneka zibe yi-apricot, ipereji okanye umbala we-salmon.
Amehlo "entwasahlobo," njengeluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza kunye nombala obomdaka kunye nama-speckles, aya kuhambelana nemibala ye-caramel, ipayipi, i-golden beige kunye ne-golden brown, ingabonakali, Abanikazi bamehlo abomdaka bafanelwe zonke izinto eziluhlaza.
Inki kunye neepensile zeenki, nazo zifananisa nombala wamehlo.
Umlomo we-lipstick kufanele ube lula kwaye ukhanye. I-Peach, corral, i-golden-orange ilungile.
Uhlobo lwe busika.
Inyaniso yokuba imibala emininzi yasebusika ayithethi ukuba owesifazane wasebusika kufuneka abe mnqweno, adideke aze adibene. Ngokuphambene noko, banembonakalo eqaqambileyo, enamandla kwaye emangalisayo. Ngokuqhelekileyo, abafazi behlobo lobusika baneenwele ezimnyama; Umbala okhanyayo okanye umbala wesikhumba somnquma; amehlo omdaka, obuluhlaza okanye obuhlaza.
Xa ukhetha isiseko kunye nomgubo, thintela i-shades yellow. Ubuncwane kunye nefuthe kufuneka kube yi-shadow shades. I-Blusher ibhetele ukukhetha imibala ye-fuchsia okanye umbala obomvu wewayini. Uhlobo lwamabhinqa ngolusuhlobo lwebusika lungcono ukuba ungasebenzisi i-blush kuzo zonke, kodwa ukunika kuphela amehlo kunye nemilomo.
I-Eyeshadows ayikhethi imibala eqaqambileyo: i-green-gray, eluhlaza ebandayo, i-turquoise, imibala ye-eggplant, i-blue blue.
I-Mascara kufuneka ibe mnyama, lo mbala ulungele uhlobo lohlobo lwasebusika.
Xa ukhetha umlomo, kufuneka ukhumbule ukuba ukugqwesa kulunge ngakumbi kwamehlo okanye emlonyeni. Abafazi besibusika, obomvu obomvu, i-fuchsia, i-bordeaux kunye nombala we-blackberry balungile.
Ibhinqa-ekwindla yinto eqaqambileyo kwaye ishintshile, ngamanye amaxesha inomtsalane kwaye inomdla, iyabanda kwaye ibukhali. Ngokuqhelekileyo abanikazi bokubonakala kwekwindla babe ne-chestnut, iinwele ezinobumnandi okanye obomvu. Umbala wesikhumba unqabileyo, kunokuthi kubekho i-freckles. Amehlo "ekwindla" ahlaza, anobomvu okanye ayingqunga, eneengqimba zegolide.
I-cream ye-tonal ifanele ibe yigolide okanye i-tint yellow. Unokufaka i-powder ukulungisa itoni, kodwa ukuba unayo i-freckles, kungcono ukuba ungabonakalisi.
Kuhlobo lwesikhumba ekwindla, i-salmon, i-terracotta okanye umbala wezobhedu ufanelekile.
Yonke imibala ekwindla ingadibaniswa ekwenzeni kwamehlo. Imibala yomhlaba yomthunzi wesiso nayo ikhethwayo. I-mascara ebomvu emnyama iya kwenza ukuba ubukeka bakho buhle ngakumbi.
I-Lipstick emlonyeni wakho, nayiphi na, ngaphandle kweetoni ezibandayo zombala obomvu.
Abasetyhini benhlobo yehlobo bahle kwaye bayamthanda. Ngokuqhelekileyo banesikhumba esilula kunye ne-pink tinge; Amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, aluhlaza okanye adibene nombala. Izinwele zinokuba zibomvu ezimhlophe, ziphantse zibomvu kwaye zibomvu.
Ukuba uhlobo lwakho lokubonakala luhlobo, ke uphonsa ngaphandle kwe-arsenal yakho isiseko nge-yellow tint. Itheyibhile kufanele ibe yendalo: beige ebomvu, umbala wendlovu, i-beige epholile.
I-Blush kufuneka isetyenziswe ngokungazelelwe. Njengaye ithoni, i-rouge kufuneka ibe ngamathoni endalo.
Izithunzi zamehlo kufuneka zikhethe amathoni e-pastel. Ukulungelelanisa ngokugqithiseleyo ukuthutha, imvi, i-aquamarine imibala, izithunzi ezimnyama.
Sebenzisa i-mascara ebomvu emnyama okanye ebomileyo, ngenxa yokuba le mibala ingafani nenye iya kuhambelana nokubonakala kwehlobo.
Imibala yakho yomlomo: i-cherry, i-red-wine, i-raspberry. Naziphi na iimvavanyo zamkelekile, kodwa ungasebenzisi umlomo nge-golden tinge.
Ubuso obusondayo obuso, iresiphi
Kutheni umntwana ehlutha?
Iimpawu ezisetyenziswayo ze-kumquat
Iifomati zezityalo zangaphakathi, izityalo
Iidlephe zokudala i-spring mood
Inkunzi yemvu enomdla kunye neenkukhu
I-Horoscope ngo-Oktobha 2017 - iSagittarius yabesifazane-ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl